Nchọpụta ngalaba: Njikwa Enterprise nke Ngalaba Akụ | Martech Zone
Ọgba aghara na-ezo na ụwa dijitalụ. Companylọ ọrụ ọ bụla nwere ike tufuo ngwa ahịa nke dijitalụ ya na oge mgbe ndebanye aha na-eme n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche yana mgbe njikọta na nnweta na-agbakwunye weebụsaịtị ọhụrụ na ngwakọta.
Ngalaba edebanyere aha na enweghi mmepe. Weebụsaịtị nke na-aga ọtụtụ afọ na-enweghị mmelite. Ozi agwakọtara gafee usoro ntanetị. Mmefu na-enweghị ego. Ego ole furu efu.
Ọ bụ obodo na-eme mkpọtụ.
Ọnụọgụ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na-agbanwe mgbe niile, idebe usoro nwere ike isi ike, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ abanyelarịrị na ọgbaghara dijitalụ a.
Tụlee ụlọ ọrụ nke gbalịrị ịdebanye aha otu ngalaba wee chọpụta na ewerela ya. Na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ, ndị isi ghọtara ọdịnaya nke yiri nke ha na akara ụghamaahịa ha ma mee ngwa ngwa ka ngalaba iwu ha kwadebe mwakpo ọgụ - naanị iji chọpụta na e debara aha ngalaba ahụ n'akwụkwọ na ngalaba enyemaka ọhụrụ.
N'ụzọ kwere nghọta, ụlọ ọrụ ahụ na-echegbu onwe ya na aghụghọ na-aga n'ihu, ha ga-agakwa nnukwu ego iji lụọ ya n'ihi na ha amaghị na ha nwere ya n'oge niile.
Nke a bụ ihe atụ nke ọgba aghara dị na ụwa dijitalụ. O siri ike ịchụ ihe niile, ebe niile, na ịghọtazu ihe ị nwere. Ọ na-eweta ọgba aghara na ọ ga-eme ka ụlọ ọrụ na-efu ego.
E nwere ihe egwu ndị ọzọ na - eche ihu maka ịre ahịa dijitalụ nke oge a gụnyere ndị ọrụ arụrụala na - emepe ngalaba ngalaba C-Suite amaghị ma ọ bụ biputere ọdịnaya dị ala na ụlọ ọrụ gọọmentị.
O nwere ike ịbụ na ndị ọrụ na-arụrụ onwe ha azụmaahịa na ngalaba aha ụlọ ọrụ. Ha nwere ike ịdenye aha iche iche mana ha tinyere ngwaahịa ma ọ bụ logos nke ụlọ ọrụ ahụ. Ndị ụlọ ọrụ anaghị eji ya egwu na ha maara nke ọma ihe ha nwere na dijitalụ, mana ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ha amaghị.
Ihe ize ndụ ndị ọzọ gụnyere ụgwọ ndị a na-atụghị anya ya - ohere na-agbawa obi na ụfọdụ ọdịnaya dị na weebụsaịtị ụfọdụ amabeghị miri emi na pọtụfoliyo ụlọ ọrụ anaghị echekwa nwere ike ibute nsogbu.
Ọ bụrụ na ị naghị achịkwa ngalaba gị, kedu ka ị si mara ihe dị na ha? Ọ bụrụ na onye ọrụ aghụghọ ma ọ bụ onye na-enwetaghị ikike na-edebanye aha na ngalaba ụlọ ọrụ gị ma tinye ozi mkparị ma ọ bụ ozi ezighi ezi, ị nwere ike ịdaba.
Enwerekwa ihe ọghọm nke ụlọ ọrụ na-asọ mpi megide onwe ya - ọ bụghị naanị ịhapụ SEO na teknụzụ ahịa ndị ọzọ siri ike na tebụl, mana na-emerụ ngalaba azụmahịa ọ bụla site n'itinyeghị ha n'amaghị ama.
Dịka ọmụmaatụ, kwuo na ị na-ere ụdị wijetị atọ, nke ụlọ ọrụ gị dị iche iche wuru. Ọ bụrụ na ibipụta nke a nke ọma, igwe na - achọ ihe ga - ahụ gị dị ka ụlọ wijetị ma tinye ya n’elu ndepụta ha. Mana na-enweghị nhazi, ụlọ ọrụ ọchụchọ na-ahụ ụlọ ọrụ atọ ejikọtaghị kpamkpam, kama ịnweta mmụba site na nha gị, ị na-akụ azụ azụ.
Ihe ndị a niile - site na ụgwọ nke ọtụtụ ndị na-edebanye aha na ngalaba na ụlọ ọrụ ndị na-ejide ọtụtụ puku ebe nrụọrụ weebụ na-amaghị - mepụta ọgba aghara, mebie ụdị ma mechaa kwụsị ụlọ ọrụ site na ịnụ ụtọ ọkachamara, akara ngosi dijitalụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Tupu ụlọ ọrụ enwee ike iche maka ịkwalite akara ahụ, ọ gharịrị ịkọwa ya. Nke ahụ na-amalite site na ịdepụta ihe onwunwe nke ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ kpamkpam, ọ pụtaghị ihe ọ bụla na oge mgbe ebe ntanetị na-agbanwe mgbe niile.
“Olee otu isi mara ihe ị ga-eme belụsọ na ịmaghị ihe ị nwere?” na-ajụ Russell Artzt, onye nchoputa na onye isi nke Digital Associates. "Ozugbo inwetara ozi a, ị ga - eme mkpebi ndị amamihe dị na ha banyere ịhazigharị gburugburu dijitalụ gị."
Tinye Ndị mmekọ Dijitalụ, ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ nke na-enyere ndị ahịa aka ịghọta ezigbo ọnọdụ dijitalụ ha tupu ha atụ aro ihe ha ga-eme. Na obi nke Digital Associates bụ Nchọpụta Ngalaba, ngwaahịa ọhụrụ nke nwere ike ịchọpụta ngalaba niile edebara aha na ụlọ ọrụ enyere. Ọ na-eji nchekwa data zuru ụwa ọnụ nke ihe karịrị 200 nde ngalaba na ụlọ ọrụ 88 nde, yana nde ọhụrụ ọhụrụ agbakwunyere kwa izu.
Nchọpụta ngalaba bụ ngwanrọ ngwanrọ na - arụ ọrụ nke na - enyocha 88 nde ụlọ ọrụ ụwa na ihe karịrị nde 200 ndebanye aha - yana nde ndị ọzọ agbakwunyere na nchekwa data kwa izu - iji chọpụta akara ụkwụ dijitalụ nke ụlọ ọrụ.
Enwere ike ịba ụba na azụmaahịa niile, Nchọpụta Ngalaba na-eji nchekwa data ụlọ ọrụ iji kọwaa nkọwa zuru ezu, ụlọ ọrụ nke ihe karịrị ụlọ ọrụ 88 nde gburugburu ụwa - ihe niile site na adreesị IP na nọmba ekwentị na ndị isi C-Suite - iji chọpụta aha ndị nwere ike ga-agbaghara site na ngalaba-search ngwaọrụ.
Ozugbo ụlọ ọrụ ghọtara n'ezie akụ ya dijitalụ, Digital Associates nwere ike nyochaa arụmọrụ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ma chepụta atụmatụ iji hazie ozi ahịa, belata mmefu dijitalụ ma mee ka uru ya bawanye.
Ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ahụ nwere njiri aka na akara ukwu dijitalụ ha nke ga-aga nke ọma na akụnụba taa. Ugbu a, agbanyeghị, ọtụtụ ụlọ ọrụ amataghị etu obere njikwa ha nwere na akụ dijitalụ ha yana etu esi etinye ụfọdụ ndenye ego na teknụzụ nwere ike ime ihe dị iche.
Tags: ndị dijitalụnchọpụta mpagharanjikwa ngalabangalabaijikwa ngalaba